Warbixin: Maxaa Laga Filan Karaa Geeddiga AMISOM Iyo Galaangalka DFS Ee Sugidda Ammaanka ? – Hornafrik Media Network
10-sanno kadib, Taliska Ciiddanka Hawlgalka AMISOM waxay diyaar garow ugu jiraan inay dib ugu laabtaan dalalkooda, kadib, markii ay Dagaal aan dhamaad lahayn la galeen Alshabaab.
Waana Istaraatijiyad ku soo beegantay Xilli uu Madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay Dagaal Cusub oo ka dhan ah Alshabaab, iyadoo ay Dowladda Maraykanka iyo kuwa Gobalka ay u muujiyeen Taageero Milliteri.
Khubarada Milliteri ayaa rumeysan inay kaaf iyo kala dheeri noqon karto haddii ay Ciiddanka AMISOM bilaabaan inay ka baxaan Somalia, xilli la iclaamiyey Dagaal cusub oo ay Ciiddanka DFS la galayaan Alshabaab, waana hubanti inay iska kooban tahay Natiijadda laga filan karo Hawlgalkaasi.
Khubarada Milliteri waxay kaloo sheegaan inay DFS ku qanacsan tahay Duqeymaha Diyaaradaha Maraykanka, balse waxaa meesha ka maqan Shaxda Milliteri ee ku aadan inay Ciiddanka isku mar ka wada hawl-galaan dhulka iyo cirka.
Ciiddanka AMISOM oo muddo 10-sanno dagaal kula jiray Alshabaab waxay rumeysan yihiin inaan si fudud lagu loodin Karin Alshabaab, haddii aan la helin Diyaarado wax duqeeya iyo Hawlgal dhinaca Sirdoonka ee Mandiqadda.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in Taagta AMISOM horey loo qiimeeyey, isla markaana uu Halgankooda keenay in Alshabaab laga saaro magaalladda Muqdisho iyo Degmooyin kale, balse, Hawlgalka AMISOM weli waa Qabyo,wuxuuna Waqtigu ka dhamaanayaa iyadoo ay Hawshi iAMISOM qabyo tahay.
Saraakiisha Milliteriga ee Soomaalida ayaa rumeysan inay Bixitaanka AMISOM naruuru u noqn doonto Ciiddanka Qaranka, kuwaasi oo sannooyin badan mushaar yar iyo daryeel-xumo ku soo nolol qaatay.
Waana hubaal inuu caqliga saliimka qaadan kari in Askariga AMISOM uu bishii qaato lacag la mid ah Mushaarka Askariga Soomaalifa ee sannadkiiba.
Qaladka noocaasi ayaana ah mid aysan Madaxdeena kuwoodii hore iyo kuwa haatan ku baraarugsanayn Qiimaha Askariga Waddaniga, mana jirto Madal ay Deeq Bixiyayaasha Calaamiga ku baraarujiyeen in isku mushaar laga dhigo Askariga AMISOM iyo Askariga Qaranka.
Si kastaba ha ahaatee, Qeylo-dhaanka Bixitaanka AMISOM ee Xilligan Kala-guurka waxaa loo arki karaa Gorgortan iyo Qandaraas cusub oo ay ku sii joogaan, waxaana isweydiin mudan Maxaa laga filan karaa Geeddiga AMISOM iyo Galaangalka DFS u yeelan doonto Sugidda Ammaanka ?